राष्ट्रिय बीमा संस्थानको नाफामा कमी | गृहपृष्ठ
Home लगानी राष्ट्रिय बीमा संस्थानको नाफामा कमी
on: February 14, 2019 लगानी
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको नाफामा कमी
फागुन २, काठमाडौं (अस) । यस आर्थिक वर्षको ६ महीनामा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको नाफा रू. ८२ लाख ९३ हजार रहेको छ । यो नाफा गत वर्षको तुलनामा ३२ दशमलव ८६ प्रतिशत कम हो । यस वर्ष कम्पनीको कुल आम्दानीमा कमी आएकाले नाफामा असर परेको देखिन्छ । गत वर्ष रू. २ करोड १२ लाख ६२ हजार कुल आम्दानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. १ करोड ८५ लाख ८९ हजार मात्र आम्दानी गरेको छ ।
हाल रू. १८ करोड १० लाख चुक्तापूँजी रहेको संस्थानको जगेडा कोष रकम भने रू. १८ करोड २४ लाख ७० हजार छ । जगेडा कोष रकम गत वर्षभन्दा १२ प्रतिशत बढी हो । त्यस्तै, जीवन बीमा कोषमा रू. १९ अर्ब २० करोड ६४ लाख ११ हजार रहेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । यो रकममा गत वर्षभन्दा ३२ दशमलव ४८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
गत वर्षभन्दा यस वर्ष २ गुणा बढी रू. ४ अर्ब ४० करोड ५६ लाख ७७ हजार खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको कम्पनीले गत वर्षभन्दा २१ प्रतिशत बढी रू. १५ अर्ब १० करोड ४ लाख १६ हजार खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले बीमालेख धितोमा राखी यस वर्ष रू. १ अर्ब २८ करोड ९६ लाख ५३ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ । यो रकम गत वर्षको यसै अवधिमा रू. १ अर्ब १८ करोड ९ लाख २६ हजार थियो ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको नाफा १ करोड ६८ लाख
राष्ट्रिय बीमा संस्थान ५२ वर्षमा, चालू आवको ६ महीनामा ४ अर्ब ४१ करोड बीमा शुल्क संकलन
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको नाफा ४४ लाख